Kugadzirwa kwembatatisi muEjipitori: Kunze Kunze Kunoda Kuti Kumutse Kufarira muBiopesticides - Potato System Magazine
Kana tichitaura nezve Egypt, isu hatisi kazhinji kutaura nezvekurima. Zvichakadaro, iyi indasitiri inopa nezve 12% yeiyo GDP yenyika, inofungidzirwa ingangoita madhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora.
Ruzhinji rwenyika rwuri mubhanhire regwenga, izvo zvisingatadzise Egypt kubva pakuva mutengesi mukuru kwazvo wembatatisi kuEU. Zvinotoshamisa kuti maIjipita anowana mhedzisiro yepamusoro nekushandisa kwakaderera zviwanikwa - avhareji kudyiwa kwemishonga yezvipembenene pano kwakadzikira zvakanyanya kupfuura avhareji yenyika Vanozviita sei?
GROPRO Corp., mugadziri weUS uye mutengesi wezvigadzirwa zvekuchengetedza goho, achangopedza rwendo rwekutsvagisa zvekurima kuEjipitori. Muna Chikumi, GROPRO yakaburitsa gwaro, rakagadzirirwa nenyanzvi dzaro pamhedzisiro yerwendo, paPotato News Nhasi portal. Heano mamwe akatorwa kubva pairi.
Kuchinja magwenga kuita minda
Dunhu rekurima reEjipitori rakasungwa zvakanyanya neNile Valley uye Nile Delta, ine oases akati wandei uye imwe ivhu rinorimwa muSinai. Yese nzvimbo yekurima yeEgypt inodiridzwa, kusara kwenzvimbo dziri pamhenderekedzo yeMediterranean.
Nekuda kwehunhu husina kunaka hwemvura yeNairi, kuchengetedzwa kwezvirimwa zvinorimwa munzvimbo dzediridziro ndechimwe chezvinhu zvakakosha mukuvimbisa nekusimbisa mhando inogamuchirwa yekukohwa kweramangwana (pamwe nehuwandu hwezvigadzirwa) zvezvirimwa zvese zvakarimwa.
Nzvimbo zhinji dzekuEgypt dzekurima hadzisi dzakakura: avhareji purazi ingangoita 1 hectare. Iyo yakazara nzvimbo yevhu rakarimwa gore rega muEjipitori ingangoita mamirioni 4,83 mahekita. Hurumende iri kushanda pachirongwa chikuru chekudyara kuwedzera nzvimbo yekurima yenyika nekuwedzera mahekita mamirioni 1,2 sechikamu chekudzosa kumaodzanyemba. Kwemakumi mana emakore apfuura, 370 mahekita enzvimbo nyowani yakadzoserwa yakawedzerwa kunzvimbo yekurima yeEjipitori.
Egypt iri kushandura magwenga kuita minda yekurima kuburikidza nekushandisa kwakanyanya kwekudonhedza kudiridza uye matekinoroji ezvekurima zvazvino.
Kugadzirwa kwegore negore kwemichero nemiriwo muEjipitori mu2018 yaive ingangoita mamirioni makumi matatu nemashanu (FAO). Kunyanya, varimi vanorima matomatisi, hanyanisi uye matapiri. Egypt ndiye mutengesi mukuru weti mbatatisi.
Kunze kwenyika mbatatisi
Muna 2018, Egypt yakatumira kunze kwematoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemazana emazana emapatata uye yakapinda munyika shanu dzekunze, ichipa mbatatisi kunyanya kuRussia neEU. Mu759, Egypt yakatora 200% yemusika wepasi rose wekutengesa kunze kwenyika, mbatatisi dzeEjipitori kunze kwenyika mu2019 dzakasvika madhora 5.
Mbatatisi dzeIjipita dzinozivikanwa nehunhu hwadzo hwakanaka sezvo dzichirimwa muvhu kana muvhu rejecha. Zvakare, mbatatisi dzeIjipita dzinozivikanwa nevatengi kune yavo-refu-nguva yekuchengetedza kugona. Mwaka wekutumira kunze kwembatatisi dzeIjipita unotora kubva pakati paNdira kusvika kupera kwaMay.
Iko kushandiswa kwe biopesticides mune zvekurima muEjipitori
Tichifunga huwandu hukuru hwekutengesa kunze kwenyika kwezvirimwa zveEjipitori kuEU, nyaya yemhando yezvigadzirwa izvi iri kuramba ichikosha. Musika weEuropean une mirau yakaoma kwazvo iyo inorambidza kushandiswa kwemakemikari mukugadzirwa kwechikafu.
Panguva imwecheteyo, parizvino, vagadziri veEjipitori havanyanyo shanda mukushandisa biopesticides, asi nyanzvi kubva kuGROPRO vanotenda kuti mamiriro aya achachinja.
Source: Potato Nhau Nhasi
Tags: biopesticidesmbatatisi yegyptkudiridza
Bryansk mbatatisi inotengeswa pamazana mazana maviri rubles pa kilo
Webinar nyowani "HZP-Si Sadokas" #HZPC